प्रेमगित-३ खेल्न ईच्चुकको भिड, सर्भर नै डाउन, यसरी भर्न सकिन्छ फारम
काठमाण्डाै – सुपरहिट फिल्म सिरिज प्रेमगीत ३ खेल्न युवतीको चर्को प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । आउँदो चैत २८ को रिलिज डेट तोकेर निर्माण हुन लागेको ‘प्रेमगीत ३’मा नयाँ नायिकाको खोजी भइरहेको छ ।
निर्माता सन्तोष सेनको फेसबुकबाट
गीतको लागि गरिएको कास्टिङ कलमा यति धेरै जनाले इच्छा देखाउनु भयो, त्यसको लागि हृदय देखि धन्यबाद, हाम्रो वेबसाईटमा धेरै डाटा एन्ट्री भएकाले हाम्रो सर्भर डाउन भएको छ, यसको लागि हामी माफी माग्न चाहन्छौ । साथै, हाम्रो वेबसाईट हामी मर्मत गरिरहेका छौ । त्यतिबेला सम्मका लागि हजुर हरु आफ्नो डाटा र फोटोहरु हाम्रो मेल आइडी [email protected] मा मेल गर्न सक्नु हुनेछ ।।
युवतीको चर्को प्रतिष्पर्धा
सुपरहिट फिल्म सिरिज प्रेमगीत ३ खेल्न युवतीको चर्को प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । आउँदो चैत २८ को रिलिज डेट तोकेर निर्माण हुन लागेको ‘प्रेमगीत ३’मा नयाँ नायिकाको खोजी भइरहेको छ ।
निर्माता सन्तोष सेनले केही दिनअघि ‘प्रेमगीत ३’ निर्माणको घोषणा गर्दै फिल्ममा नयाँ नायिकाका लागि आवेदन खोलिएको बताएका थिए । नायक प्रदिप खड्कासँग ‘स्क्रीन शेयर’ गर्ने युवतीले आसुसेन फिल्मसको वेबसाइट मा आवेदन पठाउनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए ।
तर नयाँ नायिकाका लागि आवेदन मागिएको तीन दिनमै आसुसेन फिल्मसको वेबसाइट सर्भर डाउन भएको निर्माता सेनले बताएका छन् । मंगलबार फेसबुकमा स्टाट्स पोष्ट गर्दै सेनले नयाँ नायिकाका लागि इमेलमा आवेदन दिन पनि आग्रह गरेका छन । प्रेमगीतमा प्रदीप खड्का र पूजा शर्माले अभिनय गरेका थिए । प्रेमगीत २ मा भने प्रदीपसँग अश्लेषा ठकुरीले रोमान्स गरेकी थिइन् ।
फाराम भर्न निर्माताको आभान आव्हान,
“प्रेम गीत ३ को लागी उत्कृष्ट प्रतिभा को खोजी”
चलचित्र प्रेमी महानुभाव ज्युहरु,
यसअघि थिम पोस्टर सार्वजनिक गर्दै चलचित्रको रिलिज मिति तपाईहरुमार्फत दर्शकहरुलाई जानकारी गराएका थियौं, अहिले हामी समाजमा रहेको प्रतिभा खोजीको अर्को विषयको साथ तपाइहरुको सहयोग लिएर दर्शकहरुलाई जानकारी दिन गैरहेका छौं । आशा छ, हिजोका दिनमा जस्तै आज र आगामी दिनमा पनि तपाइहरुको महत्वपुर्ण सहयोग रहनेछ ।
विषय : मुख्य अभिनेत्रीको अडिसन आह्वान
चैत २८ गते प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘प्रेम गीत ३’ को मुख्य अभिनेत्रीका लागी हामीले अडिसनबाटै एकजना राम्रो अभिनय गर्ने अभिनेत्री चलचित्र उद्योगमा प्रबेश गराउने सोंच राखेका छौं । सोहि अनुसार हामीले आधिकारिक रुपमा एकजना अभिनेत्रीको लागी अडिसन आह्वान गरेका छौं ।
आवेदन कसरी दिने ?
आसुसेन फिल्मको ब्यानरवाट निर्माण हुने यो चलचित्रका लागी इच्छुकहरुले संसारभरबाट अडिसनमा सहभागी हुन सक्नेछन् । उहाँहरुले aasusenfilms.com मा गएर फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा आसुसेनको ईमेल : [email protected] मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
हालै खिचेका ४ वटा स्पष्ट अनुहार देखिने तस्विरसहित उहाँहरुले आफ्नो बायोडाटा पठाउनुपर्नेछ । अभिनेत्री बन्न चाहनेहरुको उचाई ५.२ देखी ५.७ सम्म हुनुपर्नेछ । १८ बर्षभन्दा माथि र २५ बर्ष नपुगेको हुनुपर्नेछ ।
कसरी छानिनेछ अभिनेत्री ?
आवेदन आइएसकेकाहरुमध्ये २० जना फाइनल अडिसनका लागी छान्नेछौं । उहाँहरुमध्येबाट एकजना मुख्य अभिनेत्री छनौट गर्नेछौं ।
कहिलेसम्म सम्पर्क गर्ने ?
इच्छुकहरुले आगामी जेठ १० सम्म सम्पर्क गरिसक्नुपर्नेछ ।
चलचित्र प्रेम गीत ३ आसुसेन फिल्मको ब्यानरमा निर्माण हुन गैरहेको पाँचौं प्रोजेक्ट हो । यो चलचित्रको मुख्य अभिनेत्री हुन चाहनेहरुले हाम्रो आधिकारीक ठेगानामै सम्पर्क गर्नुहोला ।
हामी झण्डैं १ बर्षदेखी स्क्रिप्टको काममा छौं र अबको २ हप्ताभित्रै स्क्रिप्टको काम सकेपछि कलाकार छनौट सक्नेछौं । मुख्य कलाकार छान्ने काम सकिएपछि हामीले आधिकारिक रुपमा चलचित्र निर्माणको घोषणा गरी चलचित्रका विभिन्न बिषयमा जानकारी गराउनेछौं ।
“यो जानकारी सरोकार राख्नेको मा पुर्याउन सेयर तथा मेनसन गरिदीनुस होला”
निर्माता सन्तोष सेन
आसुसेन फिल्म प्रोडेक्सन